गत डिसेम्बर १ मा विश्वमा एड्स दिवस मनाइयो । १९८८ देखि यो दिनमा मानिसहरुलाई एचआइभी एड्सप्रति जागरुकता फैलाउनका लागि दिवस मनाउने गरिएको हो । अहिलेसम्म एड्स रोग निको पार्ने उपचार तथा औषधि पत्ता लागेको छैन । आखिर सबैभन्दा पहिले कुन व्यक्तिलाई एड्स भएको पत्ता लागेको थियो त ? अनि के कारणले मानिसमा पहिलोपटक एड्स सरेको … Read more
मानिसले मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउन पाउँदैनन् । तर निकट भविष्यमा गाडीलाई नै मादक पदार्थ सेवन गराएर चलाइनेछ । शोधकर्ताहरुका अनुसार सन् २०२२ सम्ममा पेट्रोल डिजेलको साटो बियर हालेर गाडी चलाउन सकिनेछ । बेलायतको बि्रस्टोल विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले एक यस्तो प्रविधिको विकास गरेका, जसले बियर भरेर गाडी चलाउन पाइनेछ । यस प्रविधिमा बियरमा रहेको इथानोललाई … Read more
एड्स दिवसमा मिस कण्डम प्रतियोगिता
विश्वमा हरेक वर्ष डिसेम्बर १ मा एड्स दिवस मनाइन्छ । यस अवसरमा जागरुकताका लागि दुनियाभर नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ । तर यी कार्यक्रमहरु मध्ये सबैभन्दा अनौठो मध्येको एक चाहीँ थाइल्याण्डमा आयोजना हुन्छ । एड्स दिवसको अवसरमा थाइल्याण्डमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रम त्यहाँको सबैभन्दा चर्चित सेलिब्रेसन पनि हो । वास्तवमा एड्स दिवसको अवसरमा थाइल्याण्डमा हरेक … Read more
यी महिला, जसले १० हजार जनासँग सेक्स गरेकी छिन्
अष्ट्रेलियाकी एक महिला अहिले चर्चामा छिन् । ३९ वर्षकी ग्वाइनेथ मन्टेनग्रो आफ्नो द सेक्रेट ट्याबु नामको किताबमा गरिएको खुलासाका कारण चर्चामा आएकी हुन् । पेशाले यौनकर्मी रहेकी ग्वाइनेथले आफ्नो किताबमा यौनपेशामा रहँदा पछिल्लो १५ वर्षमा आफुले हासिल गरेका अनुभवलाई सँगालेकी छिन् । उनले यस किताबमा एक सफल यौनकर्मी बन्ने टिप्सहरु पनि प्रस्तुत गरेकी छिन् । … Read more
बेहुलाले बेहुली किन्ने ठाउँ !
हालसम्म तपाईले विभिन्न आवश्यक पर्ने घरायसी सामानहरुको मेला लागेको थाहा पाउनु भएको छ । तर, कहिल्यै दुलहीको बजार लागेको थाहा पाउनु भएको छ ? संसारमा यस्तो पनि एक ठाउँ छ जहाँ दुलही बेच्ने काम हुन्छ । बुल्गेरियाको स्टारा जागोर नामक ठाउँमा यस्तै खाले एक मेला लाग्ने गरेको छ । यस मेलामा आएर दुलाहाले दुलही किन्ने … Read more
जापानमा रोबोटको विहे
सबै मान्छेको विहे हुनु त समाचारको विषय बन्दैन । तर, जब रोबोटबीच विहे हुन्छ तब समाचार नबन्ने कुरै भएन । विश्वमा रोबोटबीच पनि विहे हुन थालेको छ । झण्डै २ वर्ष पहिले नै जापानले रोबोटको विहे गरेर यो कीर्तिमानी राखेको हो । सन् २०१५ को जून २७ मा पहिलोपटक जापानको टोकियोमा दुई वटा रोबोटबीच विहे … Read more
साढे ३ अर्बमा बिक्यो दुनियाकै ठूलो हिरा
विश्वमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएमध्येको सबैभन्दा ठूलो हिरा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको लिलामीमा उक्त हिरा ३ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको हो । हिरा लिलाम गर्ने संस्था क्रिस्टीका अनुसार यो हिराले विश्वमा सबैभन्दा महंगोमा बिक्री भएको रत्नको रुपमा विश्व किर्तिमान कायम गरेको छ । … Read more
बाइकबाट चोरेर पेट्रोल पिउँने बाँदर
जनावरहरु पनि अनौठो आनीबानीका हुँदा रहेछन् । यस्तै अनौठो बाँदर हालै भारतको हरियाणास्थित पानीपतको एक बजारमा हालै देखा परेको छ । यो बाँदर पेट्रोल चोर बाँदर हो । यसले स्थानीय व्यस्त बजारको पार्किङहरुमा पार्क गरिएका मोटरसाइकलबाट पेट्रोल चोरेर पिउने गरेको छ । मोटरसाइकल ठड्याएको ठाउँमा गएर उसले बाइकको इन्धन पाइप दाँतले टोकेर प्वाल पार्दछ । … Read more
बढुवाको लोभमा धेरै काम गर्दा जागिर नै चट् !
कार्यालयमा कर्मचारीले जति धेरै काम गर्यो हाकिम तथा शाहुजीको उत्ति नै धेरै प्यारो बन्छ । धेरै परिश्रम गर्ने कर्मचारीको तलब बढ्ने तथा जागिरमा बढुवा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै धेरै हुन्छ । तर यो दुनियाँमा यस्ता अभागी पनि हुँदा रहेछन् जसले जागिरमा मरिमेटेर धेरैभन्दा धेरै काम गर्दा बढुवा होइन, उल्टै जागिरबाटै हात धुनुपरेको छ । आफ्नो … Read more
यो हो दुनियाँकै ठूलो कुकुर
यो तस्वीर फ्रेडी नामक ५ वर्षे कुकुरको हो । यो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कुकुरको रुपमा गिनिज बुकमा दर्ज छ । बेलायतकी पूर्व फेसन मोडेल क्लेरी स्टोनमेनले जब नाजुक अवस्थाको देखिने एक कुकुरको छाउरो खरीद गरेकी थिइन् तब उनले त्यसदिन सोँचेकी पनि थिइनन् की त्यो एकदिन दुनियाभर प्रसिद्ध हुनेछ । त्यो सानो छाउरो आज दुनियाकै सबैभन्दा … Read more